Semalt Expert: Famerenana ny fitsidihana Bogus nitsidika ny Google Analytics
Voamarikao ve ny fitsidihan'ny fitsidihana maro be tao amin'ny tatitra Google Analytics izay manjavozavo ny bogus? Raha izany no izy, mety ho azonao ny olana momba ny spam ghost - karazana spam izay misy fiantraikany amin'ny tranonkala sy mpampiasa maro ao amin'ny aterineto. Mampalahelo fa tsy manome vahaolana amin'ity olana ity ny Google Analytics, ary tsy ho fantatrao ny fomba hanakanana ireo spam. Hoy i Lisa Mitchell, mpitantana ny Customer Success Semalt , fa ny hany fomba hanafoanana azy dia ny hifikitra azy ireo amin'ny sivana. Eny, afaka manasitrana azy ireo ianao amin'ny Google Analytics, ary izany ihany no safidy anananao.
Mety namakivaky lahatsoratra ianao manazava ny fomba fampiasana ny .htaccess rakitra ho an'ny fanakanana spam referral. Ireo manam-pahaizana ao amin'ny Rocketspark dia manome ny mpanjifany fampahalalana mahasoa momba ny fomba hanivanana ny spam referral sy ny fiarovana anao amin'ny aterineto. Inona no mitranga raha mahazo sari-tanin'ny ghost ny profil analysanao? Tahaka ny amin'ny spam mailaka, ny sanda ara-referansy dia azo alefa na voasakana. Ny tranonkala iray dia tsy maintsy manakana fikarohana fikarohana avy amin'ny fikajiana ny tranokalan'ny tranonkala amin'ny alàlan'ny fanosehana azy ireo ho any amin'ny faritra tsy misy mponina toy ny toeram-piarovana. Izy dia tokony hampiasa ny rakitra fanesorana robot na hampiditra ny soatoavina nofollow amin'ny rohy.
Voamarika fa be loatra ny tatitra momba ny Google Analytics isam-bolana no mandoto ny spam referral. Ny sasany amin'ireo spammers dia namely ny tranonkala web sy ny blôginao, namorona fomba fijery diso ary nameno ny tatitra momba ny analytics..Nandritra ny telo taona mahery, dia nisy ny fanavaozana hafa momba ny spam referral izay nampidirina tao amin'ny aterineto. Mampiasa teknika isan-karazany ny spam mba hanimba ny votoatin'ny tranonkala amin'ny valin'ny fikarohana. Tsy mitsidika ireo tranonkala ireo spam. Izy ireo dia mamorona fomba fijery ary mamitaka ny kaonty Google Analytics. Raha te-hamaha ny spam ianao, dia tokony hamorona sivana ao amin'ny Google Analytics ianao amin'ny fanakanana azy ireo. Azonao atao ny manaraka ireo dingana tsotra ireo amin'io lafiny io.
Mandehana any amin'ny fizarana Admin amin'ny kaonty Google Analytics. Eto ianao dia tsy maintsy mifidy ny fizarana rehetra Filtres eo ambany sehatr'ilay kaonty. Ny dingana manaraka dia ny manindry ny safidy New Filter ary manome ny anarana fanonona ny sivana. Tokony hametraka koa ny loharano fampielezan-kevitra ao amin'ny fizarana Exclude.
Ny fomba fisafidianana dia ny tokony handikanao sy hametanao ny lisitry ny sehatra rehetra sy ny faritra rehetra tianao hotsipihina amin'ny fizotran'ny fifamoivoizana. Tandremo ny fomba fisarahan'izy ireo amin'ny alalan'ny tarehintsoratra, ary io tsipika avoitra io dia hita eo amin'ny klavier. Azo ampiasaina mihoatra noho ny sehatra iray ihany ny totalim-pejy, fa ny totalin'ny tarehimarika dia 255, mba hahafahanao mamerina indray ny dingana telo hanivanana ny tranokala rehetra.
Avy eo, tokony hampihatra ireo sivana amin'ny pejy rehetra ianao. Noho izany dia tokony tsindrio ny bokotra Add ary ampiharo ireo fanovana alohan'ny hanakatonana ny varavarankely.
Aza adinoina ny manindry ny bokotra Save. Tadidio mandrakariva fa mety hanala ireo tranonkala spam ireo fotoana ireo. Noho izany, tsy maintsy miandry ora vitsivitsy ianao na maromaro alohan'ny ahitanao ny valiny ao amin'ny tatitra Google Analytics anao Source .